Raha araka ny fanazavan-dRazafinjato Fela, filoha nasionalin’ny AFHAM mantsy dia mahatratra efatra hatreto ireo vehivavy manana fahasembanana efa noraisin’izy ireo hiasa ao aminy. Ny iray amin’ireo dia femme de menage. Ny roa kosa « opératrice de saisie » ary miasa amina orinasa iray miantsehatra ny fampivelarana ny maha olona sy ny serasera ny iray ambiny. Hanampy betsaka ireo vehivavy manana fahasembanana hisitraka feno ny zony hiasa ny fisian’ny fifanampiana tahaka izao ankoatra ny fanafoanana miandalana ny fanilikilihana mety hahazo azy ireny eny anivon’ny fiarahamonina. Mikasika ilay hetsika fanentanana momba ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy manana fahasembanana notanterahin’ny AFHAM nandritra ny volana vitsivitsy moa dia fantatra fa fahombiazana tanteraka no azon’izy ireo tamin’ny tanàna nolalovany, tafita ny hafatra.